Ukusetyenziswa kweNkqubo yeProjekthi yePhepha leMveliso
Iiprojekthi zeNzululwazi eziPhakamileyo zeZikolo eziPhakathi noPhakamileyo
Ukusetyenziselwa ukubuyisela kubhekiselele ekuphatheni imveliso yeenkunkuma ukwenzela ukuba bakwazi ukusetyenziswa kwakhona okanye ukubuyisela izinto ezisetyenziselwayo kwimveliso yerhwebo.
Ukuphinda kusetyenziswe kwakhona kusindisa indawo yokuhlala, kunye nokunciphisa inkunkuma yabantu, ibuye isindise izibonelelo. Iintsapho ezine eziqhelekileyo ziya kusebenzisa iphepha elininzi ebomini babo kangangokuba lilingana nemithi engama-6. Ekubeni iphepha lingaphinda lisetyenziswe ngokuphindaphindiweyo, intsapho efanayo iya kusebenzisa ubuncinane besibonelelo ukuba basebenzise iphepha eliphinda lenziwe.
Ekubeni ukubuyiswa kwakhona kwimeko eshushu yendalo, kwaye iphepha eliphindaphindiweyo lilula ukwenza, le yiprojekthi efanelekileyo yezesayensi.
Bonisa indlela iphepha eliya kuphinda lenziwe ngayo ngokuzenza ngokwakho. Sebenzisa ezimbini iintlobo ezahlukeneyo zephepha ukuqala kwaye uqaphele ukungafani kwiphepha "eliphindaphindiweyo" oyilenzayo.
Uluhlu lusebenzisa iphepha lokuphinda lenziwe.
Ingakanani iphepha lakho intsapho isebenzise ngeveki enye? Faka iibhokisi, iphepha lokufaka kunye nayo yonke into emveliso yephepha. Ubuninzi bemithombo yobutyebi bentsapho yakho ingasindisa ngokusebenzisa iphepha eliphinda lenziwe?
Chaza ukunyuswa komsebenzi kwaye wongeze kangakanani ukuba utshintshile kwiminyaka eyi-10 edluleyo? 25?
Iinkonzo eziNxulumene neNzululwazi eziLungileyo
Bazali, Indlela Yokunceda Umntwana Wakho NgeProjekthi Yobugcisa Benzululwazi
Iintlobo ezintlanu zeeNzululwazi eziLungileyo
Izixhumanisi ezikhawulezileyo: Iiprojekthi zeNzululwazi eziLungileyo IiNkcazo zembono | Isikolo samabanga aphakamileyo Umsebenzi wesikolo IsiKhokelo soPhulo lweSikolo esiphakamileyo
Ngokuphathelele ezi Projekthi zeeNzululwazi eziPhandle:
Iiprojekthi zenzululwazi ezikhoyo apha kwiSayithi zabaNtsapho zabazali ziingcamango eziqulunqwe nguMkhokeli walo, uDenise D.
Witmer. Ezinye ziiprojekthi ezigqityiweyo ngexesha lokusebenza kwakhe kunye nabafundi besikolo esiphakamileyo, iiprojekthi zophando kunye nezinye iingcamango zangaphambili. Nceda sebenzisa le ngcamango yezobugcisa njengesikhokelo sokuncedisa umntwana wakho ukuba azalise iprojekthi yezenzululwazi ngokusemandleni abo. Kwinqanaba lakho njengomcebisi, kufuneka uzive ukhululeke ukuwabelana ngale projekthi, kodwa ukuba ungenzi le projekthi kubo.
Nceda ungayikukopisha le mibono yeprojekthi kwiwebhusayithi yakho okanye kwiblogi, thumela ikhonkco ukuba unqwenela ukwabelana ngawo.
Iincwadi eziphakanyisiweyo zeProjekthi zeNzululwazi eziLungileyo:
Ukususela kwiphepha lencwadi: "Izinto ezisemgangathweni zesayensi ziveliswa ebomini ngokuzondla kunye nezandla zemfundo-kwiimvavanyo ezingenziwa ngokulula kwaye zingenangqiqo ekhaya." Abantu abathenge le ncwadi baye bathi kulula ukuyiqonda kwaye lukhulu kumfundi ofuna iphrojekthi kodwa abanomdla kwiinsayensi. Le ncwadi yenzelwe abafundi abancinci nabadala.
Ukususela kwiphepha lencwadi: "Ukususela ekudaleni izixhobo zakho ezingezizo iiNewtonian (i-slime, i-putty, ne-goop!) Ekufundiseni intsholongwane yegciwane indlela yokuqhuba umgca, uya kumangaliswa inani lezinto ezintle ongayenza Iiprojekthi zeScientific American Great Science Fair. Ngokusekelwe kwikholam ye "Scientific Amateur Scientist" ehlala ixesha elide kwaye ehlonishwayo, inzame nganye inokuyenza ngezinto eziqhelekileyo ezifumaneka kwindlu okanye ezifumaneka ngokulula kwiindleko eziphantsi. "
Ukususela kwiphepha lencwadi: "Ebhalwa ngumgwebi osenzululwazi kunye ne-international winner winner, oku kufuneka kube ne-resource resource ephethe izicwangciso kunye nezikhombisi zokuhlanganisa iprojekthi efanelekileyo yezesayensi.
Apha uya kufumana i-nitty-gritty kwiintlobo ezahlukeneyo zezihloko, ukususela kwizinto ezisisiseko kwinkqubo enobulungisa yesayensi kwiinkcukacha zokugqibela zokupolisa inkulumo yakho. "
Funda Izinto Eziqinileyo Ngee-Olympian Gods
Abadlali kwi-60 Seconds: Tezuka Osamu 手塚 治虫